Author: Malalmaran Gurr
Xadiiskanu waa kaan kitaabka kalena kusoo marray ee dhahaayey: Sidaasuu markaa had iyo goor, cilmiga cusubi sharciga axkaamtiisa u ayidayaa. Hadduu ey afka la galo weelkii oo uu afka geliyo markaas daahirinta la mafaam waxa weeyaan inuu dhaqo todoba goor inuu dhaqo midda ugu horraysaayu ciid mid lagu daray ay tahay.
Tanu markaa labadii riwaayo, riwaayadii Muslim ee ugu horreeysay iyo tii Bukhaari bay isku dartay oo labada arrimood bay midba gaarkeed u mancinaysaa reebaysaa ; inuu biyihii fadhiyey ku kaajo gaarkeed bay u nahyidey, biyihii fadhiyey inuu janaabo kaga dhex qabeysto oo dhex galana gaarkeeday u nahyiday reebtay. This Blog is dedicate the stories of the prophet Muhammad peace be upon him and his Companions, and Stories of all prophets.
Taas waxaa kale oo bhluuqul mid ah, subxaananuhuu wa tacaalaa, radiyal Laahu canhu ama raximahul Laah, oo marzam doorbidnay sidooda Muslimiintu ay u adeegsanayeen weligood inaan u deyno ee aanan waxba turjumin, macnahooduna waa iska cadyahay, Soomaalida badankooduna way fahmayaan.
Sidaasoo kale isaguna jaraam sheegay in lagu ijmaacay Tirmidi iyo Ibn Mundir iyo qeyrkood baa sheegay. Ma taxriim baa yoo xaaraam miyaa arrintaasu mise waa karaaha keliya?
Sharax Xadiiska waxaa ka horreeyey xadiiskii nahyinaayey in nin uu ku qabeysto biyo ay soo hambaysay oo kasoo hadhay haweeney ama haweenay ay ku qabaysato biyo nin kasoo hadhay [Xadiiska 6aad]. Salliga Nebiga- sallal Laahu calayhi wasallam- ma aanaan Soomaaliyeyn ee sidiisa ayaan u deynay.
Bukhaari iyo Muslim ayaa weriyey. Ibn Cumar radiyal Laahu canhumaa waxaa laga weriyey in uu yiri: Xadiiskan todobaad xadiiskaasuu marka sharxayaayoo nahyigaas Nebigu- sallal Laahu calayhi wasallam- muxuu yahay?
Author archive Author website. Kalamadahan oo kale waxaan ku bedelnay sida caadi ahaan loo qoro Af Soomaaliga: Xadiisku markaa wuxuu tusinayaa: Ibn Xajar al-Casqalaani Waxaa diyaariyey: Saxiix alJaamic asSaqiir iyo qeyrkiiba.
Rasuulkii Alle — sallal Laahu calayhi wasallam- badda ayuu wuxuu ka yiri: Sidaas ayey culumadu sheegeen inay habboon tahay- sallal Laahu calayhi wasallam- taas ayaana sharci ahaan sugan. Markaa sidaa macnaheedu waxaa weeyaan biyaha wixii bedelaayu ama ha yaraadeen ama ha badnaadeene inay nijaasaynayaan. Saddexdaasuba mid waliba kitaab saxiix uu ku magacaabay buu leeyahay, oo way saxiix yeeleen.
Abuu Daawuud iyo Ibn Xibbaan baa siyaadada weriyey, waana siyaado saxiixa iyaduna. Sharax Xadiiska dacfi baa ku jira buu leeyahay laakiin daciif ma aha. Daatadiisu [jirkiisa] inay nijaas tahay yuu keenayaa, maxaa yeelay afkiisi haddii la yiri wixii uu geliyo waa uu nijaaseeyey, macnuhu waxa weeyaan inuu afkiisu nijaas maraamm, afkiisa iyo lugtiisa iyo dabadiisana ma kala duwana. Eray bixinta Ibn Xajar: Rasuulkii Alle- sallal Laahu calayhi wasallam- wuxuu yiri:.
Wajibad waa ururiyaha qoraalada diiniga ah si ay dadka jeceli inay bartaan diintood ugu fududaato akhrinta iyo daabacaada qoraalada oo af-Somali iyo English ka kooban Inshaa Allaah hadan waxaan ku guda jirtaa si aan ugu soo kordhin lahayn qoraalada Carabiga ah. Taasi waxay keentay inaan sidan u bluuuqul.
Maydita Badda Maytadiisuna waa xalaal. Salliga Nebiga- sallal Laahu calayhi wasallam- ma aanaan Soomaaliyeyn ee sidiisa ayaan u buluqul. Rasuulkii Alle- sallal Laahu calayhi wasallam- wuxuu yiri: Marka saabuun halagu dhaqo maanuu dhihine, ciid halagu dhaqo buu dhahay. Biyaha baddu markaa waa daahir oo mudahhir ah; waa lagu dahaara qaadan karaa, waa lagu qubaysan karaa, waa lagu weyso qaadan karaa, dharkaa lagu dhaqan karaa najaasadana lagaga bixin karaa, waa lagu istinjoonayaa…, waa mudahhir weeyaan.
Ibhaamkaasi xadiiska wax ma u dhimaayaa.?
Af Soomaaliga la qoro iyo Af Soomaaliga dadka intooda badani ku hadlaan way kala gedisan yihiin, tanina waxay sababtay inaan isku dayno inaan waxoogaa yara hagaajino qoraalkii aan cajaladaha ka qornay anagoo yaranayna isbedel ku yimaada sheekha hadalkiisa. Haddii ay dani kallifto inaan hadalkii sheekha wax ku kordhino si aan arrin u caddayno, waxaan adeegsanaynaa [ ]. Xadiiskanina markaa xadiiskii labaad ee Abuu Saciid Al Khudrii ayuu shardi ku kordhinayaa oo biyaha Nebigu- sallal Laahu calayhi wacalaa aalihii wasallam- [ka yiri]: Sanadku waa silsiladda dadka kala weriyey laba bilaabo shaykha kitaabkiisa ku qoray ilaa Rasuulka-sallal Laahu calayhi wasallam.
Markaa kol haddaynan nijaas ahayn hambadeeda in lagu weysaysto, biyuhuu ku weysaysanaayuu usoo qalloociyoo ay ka cabtay weelkiina markaa waxba lagama dhaqin, biyihiina lama daadinin, biyihii wuu ku weyseystay Abuu Qataadah- radiyal Laahu canhu. September 25, Buluuq al-Maraam Previous post Next post.
Laakiin labada xadiisba, xadiiska Sawbaan iyo Abuu Umaamah labadiisa riwaayaba waa daciif, kol haddii uu daciif yahayna xukun lagama qaadanayo. Laakiin waxaa inoo imaan doona laba arrimood oo xadiiskaas, laba qeyd u kala xiri doonta. Sheekhu wuxuu casharada u akhrinayaa arday xer ah oo uu kitaabo kale usoo akhriyey, sida Riyaadus Saalixiinka, goobta uu casharada ka akhrinayaana waa Makkah.
Ibn Cabbaas hooyadiina waxaa la dhihi jirey Lubaabah bint al Xaaris al Hilaaliyah- radiyal Laahu canhum dhammaantood- Markaa Nebigu- sallal Laahu calayhi wasallam- biyo ay Maymuunah janaabo kaga qabeysatay yuu uga dambeeyey suu janaabadii kaga qabeystay. Tii hore waxay ahayd inuu biyaha intuu ku kaajo haddana ku dhex qabeystaa loo diidayey. In kastoo taasi jirto, xadiisku wuxuu leeyahay shawaahid oo xadiisku waa saxiix.
Buluuqul maraam: suaala iyo jawaabo – Shariif Cabdinuur Xasan Ashariif – Google Books
Qallajiya oo kolkuu qallalo ayuu iska daahiroobayaa ma aanuu dhihin Nebigu- sallal Laahu calayhi wasallam. Alle- sarreeye- wuxuu yiri: Waxaa kolkaa suuroowda inuu ku dhinto, gaar ahaan hadduu cabitaan kaasu mid kulul uu yahay, illeen maanu kala qaadine. Markuu saxaroodo eygu ukumo yaryar oo dixrigaasu uu leeyahay oo aad iyo aad u fara badan ayaa soo baxaysoo saxaradiisa soo raacaysa. Markaa hadday biyahaasu meeshay gaaraan ay sii nijaasaynayaan ku shuba lama dheheen oo nijaastii bay sii fidinayaan.
Markaa daliilkaasuu xukunku ku sugnaaday ijmaaca ah mooyaane xadiiskan maanu ku sugnaanin. Nin asxaabtii Nebiga sallal Laahu calayhi wasallam ka mid ah waxaa laga weriyey inuu yiri: Biyahu hadday fara badan yihiinna xadiiskii Ibn Cumar baynu kusoo marray iyada dhib malaha. Hadduu xadiisku dheer yahay, faqra kasta bulluuqul baanu u samaynay si akhrintu u fududaato. Naaskuu deydeyaayoo carrabkuu soo bixbixanayaayoo wax uu jaqaa buu deydeyayaa.